March 2020 - Page2of4- RastraKhabar-Nepal's No. 1 Digital Newspaper
2020 March (Page 2)
March 22, 2020 rastrakhabar 0
नेपाली चलचित्र भेटी,लफडा लगायत धेरै थारु तथा भोजपुरी चलचित्रका निर्देशक अहिले अशक्त अवस्थामा भरतपुर, चितवनस्थित सि एम सि अस्पतालको बेडमा हुनुहुन्छ । यतिखेर वहाँलाई ठूलो आर्थिक संकट परेको छ । वहाँलाई आर्थिक सहयोग जुटाउन निर्माता, निर्देशक तथा छायांकार राजु केसि, चलचित्र निर्देशक समाज, कलाकार सुरेश चौधरी तथा बिभिन्न संघ सस्था आदी लागि परेका छ्न ।
सहयोग गर्नका लागि थारु कलाकार सभा चितवनको वाणिज्य बैंकको खाता नम्बर १३१०००९६२७०१ मा सहयोग रकम पठाउन सकिने र सिधै राजु के सि जि लाई सम्पर्क गर्न सकिने कुरा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो । जापान बस्ने चलचित्रकर्मी तथा समाजसेवी कृष्ण कार्किले निर्देशक किशोरको लागि राजु के।सि। मार्फत रु १०,०००।० सहयोग गर्नुभएको छ ।
बहुरतिभाका धनी किशोर चौधरी निर्देशक मात्र नभईकन लेखक, निर्माता, गितकार, नृत्य निर्देशक तथा राम्रो सम्पादक अनि संगीतकार पनि हुन । उनले भेटी, लफडा लगायत धेरै चलचित्रमा गित लेखन र संगीत आफैले गरेका छन । उनी बिगत २० वर्ष देखि चलचित्र क्षेत्रमा छन । उनको सिघ्र स्वास्थलाभको कामना गर्दै धेरैले फेसबुकमा पोस्टहरु पनि गरेका छन त्यस्तै मध्यमा राजु के।सि। ले पनि पोस्ट गरेका छन कि वहाँलाई सक्दो सहयोगको आवश्यकता परेको र यस्तो अवस्थामा एक चलचित्रकर्मिले अर्को चलचित्रकर्मीलाई सहयोग गर्नुपर्ने ।
त्यस्तै चलचित्रकर्मी अनि समाजसेवी कृष्ण कार्की भाइलाई चलचित्र निर्देशक किशोर चौधरीका लागि जापानबाट रु १०,०००।०० सहयोग गर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिनु भएको छ ।
हाल किशोर जि चितवनको सि एम सि हस्पिटल९नयाँ०मा उपचार गराइरहनु भएको छ र वहाँलाई आर्थिक संकट परेको हुनाले राजु केसिले सम्पूर्णमा सक्दो सहयोग गरिदिनु हुन आह्वान गर्नु भएको छ ।
March 20, 2020 rastrakhabar 0
काठमाडौँ —चैत्र ७ । कथा ईभेन्टको आयोजनामा हुन गईरहेको “मिस टिन ग्लोवल ब्युटी नेपाल २०२०” को ग्राण्ड अडिसन यहि चैत्र १५ र २२ गते राजधानीको दरवारमार्गस्थित लुना रेस्ट्रो एण्ड बारमा हुने भएको छ । आगामी वैशाख महिनामा सम्पन्न हुने सो सौन्दर्य प्रतियोगिता, नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा परिचित गराउँदै नेपालको मोडलिङ क्षेत्रलाई पनि अन्तराष्ट्रिय स्तरसम्म विकास गर्दै लैजानेन उदेश्यका साथ आयोजना गर्न लागिएको आयोजक संस्थाकी अध्यक्ष गनिका गुरुङ्गले बताइन । प्रतियोगिताका लागि १३-१९ वर्ष समूहबाट छनौट हुने प्रतियोगीहरुलाई एक महिनासम्म विशेष प्रशिक्षण प्रदान गरिने छ जसमा नेपालका ख्याति प्राप्त कोरियोग्राफर ट्रेनर बाट प्रतिस्पर्धिहरुलाई सञ्चार दक्षता, एमसिइङ, पब्लिक स्पिकिङ, व्यक्तित्व विकासको कक्षा, आत्मविश्वास अभिवृद्धि गराउने कक्षा, मोटिभेसन क्लास तथा व्यक्तित्व विकास सम्बन्धि विषयमा प्रशिक्षण दिनेछन् । प्रशिक्षणको क्रममा प्रतिस्पर्धिहरुलाई फिटनेस, योगा, स्पा, सेल्फ मेकअप क्लास, फेशन क्लास सहित गतिविधीमा समेत सहभागि गराइने भएको छ । प्रतियोगीहरुले आफुले सिकेको ज्ञानहरुलाई समाजमा प्रतिश्प्रधा गर्न अनि आफ्नो आत्मा बिश्वास बढाएर भोलिको दिनमा आज सिकेको कुराहरुलाइ उपयोग गर्न सक्ने बनाउनुनै लक्ष्य रहेको आयोजक अनिल बुर्जा मगर बताउछन l यस सौन्दर्य प्रतियोगिताले नेपाली युवतीहरु बीच व्यक्तित्व विकास र अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गरि समाजमा एक प्रकारको सकारात्मक सन्देश दिन सफल हुने कुरामा उनी बिस्वस्त छन् । इच्छुक प्रतियोगीहरुले कथा ईभेन्टको कार्यलय तथा लुना रेस्ट्रो एण्ड बार, दरवारमार्गबाट फर्म लिएर अडिसनमा सहभागिता जनाउन सक्नेछन। यस सौन्दर्य प्रतियोगिताको बिजेताले उपहार स्वरुप स्कुटर र अन्य आकर्षक गिफ्ट ह्याम्परको साथसाथै ब्राजिलमा आयोजना हुने “मिस टिन ग्लोवल ब्युटी ईन्टरनेशनल,२०२०” मा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने छन ।
विस्तृत जानकारीको निम्ति:- कथा ईभेन्ट प्रा लि सम्पर्क :- ९८६३९४२५७७
काठमाडौं, ०७ चैत्र – स्व. उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको स्‍मृतिमा स्थापित भरतमोहन अधिकारी स्‍मृति फाउण्डेसनले ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरि कोराना भाईरस (कोभिड १९) सम्बन्धमा सचेतना अभियान संचालनमा ल्याएको छ । कोरोनाको जोखिम न्युनिकरणका लागि ज्येष्ठ नागरिक सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत फाउण्डेसनले ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई लक्षित गर्दै सो अभियान चलाएको हो । फाउण्डेसनले विहिवारबाटै ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई मास्क, हेण्डवास, साबुन, सेनिटाइजर लगायतका सरसफाई सामाग्री वितरण गर्दै अभियान शुरु गरेको छ । संस्थाले विहिबार तिनकुने स्थित असाय सेवा सदन, शान्तिनगर ज्येष्ठ नागरिक आवास गृह र गल्फुटार आश्रममा आश्रित जेष्ठ नागरिकहरुलाई उक्त सामाग्री हस्ताण्तरण गर्नुका साथै तालिम प्राप्त स्वास्थ्य सेविकाबाट सरसफार्इको तौरतरिका बारे पनि जानकारी दिलाएको छ । फाउण्डेसनकी अध्यक्ष सबिता अधिकारी, स्व. नेता अधिकारीकी छोरी लिमा अधिकारी लगायत प्रतिष्ठान सम्बद्ध पदाधिकारी एवम सदस्यहरुले विभिन्न ज्येष्ठ नागरिक गृहसम्म पुगी उक्त सामाग्रीहरु वितरण गरेका थिए । उक्त सचेतना अभियानलाई उपत्यका स्थित अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक गृहसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिईएको प्रतिष्ठानकी सदस्य लिमा अधिकारीले जानकारी दिएकी छन् । ‘ज्येष्ठ नागरिक गृहमा आश्रित ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवाहरुको स्वास्थ्य प्रति हाम्रो बिशेष चासो छ, बुवा हजुर पनि (स्व. भरतमोहन अधिकारी) ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकार प्रति निकै नै सचेत हुनुहुन्थ्यो, उहाको स्‍मृतिमा स्थापित फाउण्डेसनमार्फत हामीले कोरोनाको जोखिम न्यूनिकरण गर्ने ध्ययेका साथ हाललाई काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा साताव्यापी अभियान संचालन गर्दैछौ” उनले भनिन् । प्रतिष्ठानले उक्त सचेतना अभियानलाई उपत्यका स्थित अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक गृहसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएको समेत उनले जनाईन्।
७ चैत, काठमाडौं । चीनको वुहानबाट उत्पत्ति भएपनि हाल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को ‘इपिसेन्टर’ बनेको छ, युरोपको इटाली । कोरोनाले इटालीलाई तहसनहस पारिरहेको छ । इटालीमा सबैभन्दा बढि प्रभावित ठाउँ हो, लोमबार्दी ।
लोमबार्दीस्थित बुर्गेमो अस्पतालको सिँढीसमेत लासहरुले भरिएका छन् । इटालियन संस्कारअनुसार मृतकलाई चिहानघरमा लगेर गाड्ने गरिन्छ । तर, चिहानघर सबै भरिएपछि जलाउनुपर्ने अवस्था निम्तिएको छ । पछिल्लो पटक लोम्बार्दीमा ९३ जनाको ज्यान गएपछि चिहानघरको झनै समस्या देखिएको छ ।
मृतकका लास ओसार्न सेनाका ट्रकहरु अस्पतल अगाडि लस्कर लागेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । बेलायती पत्रिका डेली मेलका अनुसार ईटालीको बुर्गेमो अस्पत्तालमा सघन उपचार (इन्टेन्सिभ केयर) का लागि विरामीहरुलाई लाईन लगाएर राखिएको छ । चिकित्सकले उपचार गर्न भ्याएका छैनन् । नयाँ विरामी थपिने क्रम उत्तिकै छ । लासहरु बेरेर सिँढीमा राखिएको छ । ती लास उठाउन १५ वटा सैनिक ट्रक लाम लागेर पर्खिएका छन् ।
कोरोना उत्पत्ति भएको चीनमा भन्दा इटालीमा मृतकको संख्या बढि भइसकेको छ । चीनमा अहिलेसम्म ३२ सय ४५ को ज्यान गएकोमा इटालीमा ३४ सय ५ पुगेका छन् । बिहीबार एकै दिन इटालीमा चार सय २७ को मृत्यु भएको छ । संक्रमण फैलिने र मृत्यु हुने दर तिब्र छ । बिरामीको उपचार र मृतकको व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ । चिकित्सकहरुले स्वास्थ्य क्षेत्र संकटमा पुगेको बताइसकेका छन् । अस्पतालमा ठाउँ नभएर स्वास्थ्यकर्मीले टेन्ट गाडेर उपचार गराइरहेका छन् । लोमबार्दी क्षेत्रमा चिकित्सक र नर्सहरुको संख्या सिमित भएकाले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको लोम्बार्दीको स्थानीय सरकारले बताइसकेको छ ।
काठमाडौं :हालै मात्र भारतको मुम्बईस्थित अँधेरीमा मोडल सुपर स्टार २ को फाइनल प्रतिस्पर्धा सम्पन्न भएको छ । नेपाली तथा भारतीय मोडलहरुको सहभागिता रहेको फेसन शो शैलीमा सम्पन्न सो मोडल प्रतियोगितामा नेपाली फेसन कोरियोग्राफर तथा संचारकर्मी रोजिन शाक्यको संचालन तथा कोरियोग्राफी रहेको थियो । प्रतियोगितामा नेपालका रबिन घिसिङ र जिना लिम्बु पाङ्मा विजेता चयन भएका थिए । आकृति सुवेदीले भने भोटिङ आधारमा विजेताको ताज पहिरिन् । नेपालकै स्मृति शाह र प्रशान्त शाह फस्ट रनर अप चयन भएको सो प्रतियोगितामा भारतीय मोडल सुमित आनन्द सेकेन्ड रनर अप तथा स्नेहा बर्मनले अर्गनाइजर च्वाइसको अवार्ड थापे । भारतीय मोडल नेहा शर्माले ट्यालेन्ट विधाको अवार्ड उचालिन् भने नेपाली मोडलहरु रोशन सुनाम वेष्ट वाक र रचना कार्की फोटोजेनिक अवार्डका हकदार बनेका थिए ।
नेपालस्थित प्रोमोटिङ सोलुसन मोडलिङ एजेन्सीले भारतको मुम्बईमा रहेको वन् आई डेस्टिनी क्रिएसनको सहकार्यमा संचालन गरेको सो कार्यक्रममा भारतीय टेलिभिजन सिरिज, वेभ सिरिज तथा थिएटरमा अभिनेत्रीका रुपमा कार्यरत नेपाली सुन्दरी सभ्यता गिरी शो स्टपरका रुपमा प्रस्तुत भएकी थिइन् । कार्यक्रमलाई विभिन्न बलिउड नृत्य प्रस्तुतिले मनोरञ्जनात्मक बनाएको थियो । कार्यक्रममा नेपालस्थित सजिनाज् क्रिएसन तथा वन्डर भाइब्स क्रिएसनका विभिन्न आकर्षक पहिरनहरु प्रस्तुत गरिएका थिए ।
काठमाडौं, मोडल नितु कोइराला भारतमा सम्मानित भएकी छन् । गत साता भारतको फरक फरक स्थानमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली मोडल नितु सम्मानित भएकी हुन् । उनलाई ‘आर्टिष्ट इन्डियन आइकन अवार्ड’ र ‘नारी रत्न’ उपाधिबाट सम्मानित गरिएको छ ।
उक्त कार्यक्रममा विभिन्न देशमा बसेर कला, साहित्य र समाजमा योगदान पुर्‍याउने ब्याक्तित्वलाई सम्मान गरियको थियो । नितुलाई नेपालमा कला र समाजसेवा गरे बापत उक्त सम्मान प्रदन गरिएको थियो ।
यो सम्मान पाउने नितु एक मात्र नेपाली चेली हुन् । आफू कलाकार हुनुमा र नेपाली चेली हुनुमा खुशी अनि गर्व लागेको कुरा नितुले बताइन् ।
March 18, 2020 rastrakhabar 0
काठमाडौं : सरकारले कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि भन्दै सिनेमा हल, सांस्कृतिक केन्द्रहरु लगायतका क्षेत्रहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कोभिड-१९ को संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिको बुधवार बसेको बैठकले यस्तो नियन्त्रण गरेको हो।